डियुटीमै अस्ताए प्रहरी हवलदार भुपेन्द्र ! – हाम्रो देश
डियुटीमै अस्ताए प्रहरी हवलदार भुपेन्द्र !
कोहलपुर । बाँकेमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट डियुटीमा खटिएका एकजना प्रहरी हवलदारको ज्यान गएको छ । मोटरसाइकलकै ठक्करबाट अर्का प्रहरी जवान गम्भीर घाइते भएका छन् । प्रहरीलाई नेपालगन्ज–कोहलपुर सडकखण्डको राँझा चोकमा सोमबार राति मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो ।
नेपालगन्जबाट कोहलपुरतर्फ आउँदै गरेको भे१०प ४७५७ नम्बरको मोटरसाइकलले चेकिङमा खटिएका प्रहरीलाई ठक्कर दिएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँके कोहलपुरले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा अस्थायी प्रहरी बिट राँझाका ईञ्चार्ज प्रहरी हवलदार भुपेन्द्र शाही रहेका छन् ।
ठक्करबाट उनीसँगै रहेका प्रहरी जवान नरेशकुमार चौधरी गम्भीर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । उनको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको छ । ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालक बर्दिया राजपुरका सन्तोष बम ठकुरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । मदिरा सेवन गरेर मोटरसाइकल चलाएका कारण प्रहरीकै ज्यान लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एक प्रहरीले जानकारी दिए । यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ । -मिसनटुडेबाट